Xidiga Juve Ee Paulo Dybala Oo Madrid Ku Sugan Xili Uu La Kulmay Diego Simeone + Sababta %
Weerar yahanka kooxda kubada cagta Juventus ee Paulo Dybala, ayaa wuxuu waqtigiisa u ku bixiyay inuu la kulmo tababaraha Atletico Madrid ee Diego Simeone, maadaama uusan kamid ahayn liiska ciyaartoyda Argentina ee dheeleysa kulamada saaxiibtinimo.
Xulka qaranka Argentina, ayaa waxay wajahaan maalmaha soo socda wadamo kale, iyadoona wadanka ugu soo horeeya oo ay wajihi doonan uu yahay Talyaaniga, kaasoo kulankooda uu dhici doono Maalinta Jimcaha ah ee Isbuucaan.
Dybala iyo Simeone ayaa waxay ku wada kulmeen Maxaaqi ku taala caasimada wadanka Spain ee Madrid, islamarkaaan waxay isla qaateen waqti fiican, iyagoona wada cashqeeyay, sida laga soo xigtay warbaahinta wadanka Spain.
Sida ay baahisay Idaacadda MARCA, Simeone ayaa wuxuu ku sugayay Maqaaxida lagu magacaabo Restaurante Kabuki, iyagoona wada-daagay cunto iyo wada hadalo badan, kuwaasoo aanan illaa iyo hada la ogayn waxa ay salka ku hayeen.
Dybala ayaa wuxuu kamid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan oo ay haysato kooxda kaalinta koowaad uga jirta shaxda kala horeynta ee horyaalka wadanka Talyaaniga, isagoona kulamadii uu ka dheelay shabaqa soo taabtay 17 jeer.
Sidoo kale, laacibkaan ayaa wuxuu noqday xidiga garoonka ugu fiican kulamadii uu fasal ciyaareekan ka dheela horyaalka wadanka Talyaaniga Todoba jeer, waxaana tobankii kulan ee uu dheelay uu dhaliyay Lix gool, taasoo caddeyn u ah inuu shaqo fiican qabtay.
Diego SimeonePaul Dybala
Afar Record aan Cidina gaarin oo Ronaldo dhigay